crypto – Orio Economics
Bitcoin ဈေးနှုန်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဒေါ်လာ၂၃၀၀၀အောက်သို့ ရောက်ရှိ
ယမန်နေ့ တနင်္လာနေ့တွင် Bitcoin ဈေးနှုန်းသည် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ဒေါ်လာ ၂၃၀၀၀ အောက်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများက ဈေးကွက်အတွင်း ပြန်လည်ရောင်းချမှုများ များပြားသောကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ယမန်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉နာရီခွဲခန့်တွင် Wallstreet ၌ Bitcoin ၁…
May 22, 2022 Technology
အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် Crypto အတွက် စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ချမှတ်သင့်ကြောင်း CoinSwitch တိုက်တွန်း
အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအပေါ် နည်းဥပဒေများ မရေရာမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအတွက် ဥပဒေများကို ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ၏ အကြီးဆုံး Crypto Application ဖြစ်သော CoinSwitch က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းအတွင်း၌ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအပေါ် ဝိဝါဒကွဲပြားလျက်ရှိပြီး အိန္ဒိယ ဗဟိုဘဏ်ကမူ…
May 7, 2022 News
US ရှိ Gucci စတိုးများတွင် Crypto ကို စတင်လက်ခံတော့မည်
တန်ဖိုးကြီးဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များကိုထုတ်လုပ်သည့် အီတလီလုပ်ငန်း ဂူချီသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဆိုင်ခွဲ ၅ ခုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး – cryptocurrencies များဖြင့် ငွေချေမှုအား လက်ခံတော့မည်ဟု သိရသည်။ ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုအနေဖြင့် စတင်မည့် ယခုဆောင်ရွက်ချက်တွင် ဖေါက်သည်များသည် Bitcoin, Ethereum, Dogecoin နှင့် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဆိုင်ခွဲများတွင်…
March 28, 2022 News, Technology
ထိုင်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဥပဒေ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပြန်
ဘလော့ချိန်းနည်းပညာ – Blockchain Tech ဖြင့်ဖန်တီးထားသည့် Bitcoin အပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး – cryptocurrencies များကို ငွေပေးချေမှုအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းအား လာမည့် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ ပိတ်ပင်သွားမည်ဟု ထိုင်းဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များက ကြေညာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းက အများဝိုင်းဝန်းအဆိုပြုထားကြသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို…
ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့ကို Bitcoin ဖြင့်လက်ခံရန် ရုရှားစဉ်းစားနေ
ရုရှား Duma Committee မှ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ဥက္ကဌ ပေဗယ် ဇာဗယ်နီ (Pavel Zalvalny) က ကြာသပတေးနေ့က ဗီဒီယိုမှတဆင့်ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအကြား ရေနံဖိုးပေးချေရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသွားရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ပေဗယ်ရည်ညွှန်းသည်မှာ တရုတ်နှင့် တူရကီကဲ့သို့ နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ၎င်းက ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး –…
March 14, 2022 News, Technology
South China Morning Post သတင်းစာက NFT များ ဖန်တီးရာင်းချ
၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် ဟောင်ကောင်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော တရုတ်သတင်းစာ The South China Morning Post သည် Blockchain – ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစနစ်နည်းပညာပေါ်တွင် သိမ်းဆည်း၊ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော ဖန်တီးမှုများ – Non-fungible Tokens (NFT) များကို စတင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ “1997 Premium…
February 10, 2022 Business, News
Bitcoin ကိုငွေကြေးအဖြစ် ရုရှားအစိုးရနှင့်ဗဟိုဘဏ်က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု
ရုရှားအစိုးရနှင့် ဗဟိုဘဏ်တို့က Bitcoin ကို ငွေကြေးတစ်ရပ်အဖြစ် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့နောက် cryptocurrencies များကိုထိန်းချုပ်မည့် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အစိုးရနှင့် ဗဟိုဘဏ်က crypto ကို “analogue of currencies” အဖြစ်သတ်မှတ်စေသည့်…
February 10, 2022 News
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ထိုင်းက ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁ ဖြစ်
နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွင်း အင်တာနက်အသုံးပြုသူအချိုးအစားနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်သူ % အချိုးတို့ကိုချပြနှိုင်းယှဉ်ပါက ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေသူဖြစ်လာသည်။ ထိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူစုစုပေါင်း၏ ၂၀.၁% သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအမျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီး အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်ယူမှုများ၊ အင်တာနက်မှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူမှုများတွင်ပင် Cryptocurrencies များကို အသုံးပြုနေကြသည်ဟု Digital 2022 Global Overview Report…
February 7, 2022 News
ဒုံးကျည်စီမံကိန်းအတွက် ခိုးယူထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေများကို မြောက်ကိုးရီးယားသုံး
မြောက်ကိုးရီးယားသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်စီမံကိန်းများအတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး – Cryptocurrency များကို ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်၍ ခိုးယူခဲ့သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ နှစ်လယ်ပိုင်းများတွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ခန့်ပမာဏရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများသည်…
February 2, 2022 News, Technology
အိန္ဒိယက ယခုနှစ်ထဲတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရူပီးကို စတင်အသုံးပြုမည်
အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး နီမာလာဆီသာမန်က ဒစ်ဂျစ်တယ်ရူပီးအား အစောဆုံးအနေဖြင့် ယခုနှစ်ထဲတွင် နိုင်ငံအတွင်း စတင်အသုံးပြုတော့မည်ဟု ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်လည်း အခွန် ၃၀% ကောက်ခံမည်ဟု စီမံချက်ရေးဆွဲထားသဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ – Cryptocurrencies နှင့် NFT ခေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အရောင်းအဝယ်၊ အရွှေ့အပြောင်းအားလုံးအတွက် နိုင်ငံက အခွန်အဖြစ်…
တရုတ်အပေါ် အကောက်ခွန်များ ရုတ်သိမ်းမှုအတွက် ကန့်ကွက်စာ ၄၀၀ ကျော် ဘိုင်ဒန်ရရှိ
သပိတ်မှောက်မှုကြောင့် နော်ဝေရေနံလုပ်ကွက်များကို Equinor စတင်ဖျက်သိမ်း
တူရကီတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ၂၄နှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး အရှိန်ဖြင့် မြင့်တက်နေ
ဖိလစ်ပိုင် ငှက်ပျောသီးများ ဈေးတက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်ဈေးကွက်သို့ အသိပေး
#google airline airlines Alibaba Amazon Apple australia auto automaker bitcoin China coronavirus covid-19 covid19 covid impact crypto Donald Trump Economy electric car elon musk energy ev export facebook food health Hong Kong Huawei India Indonesia investment Japan oil and gas pandemic Russia Singapore tech technology tesla thailand trade travel UK US usa
Orio Economics is contributing articles, business analysis, videos and interviews on the global economy, business insights and management for helping Myanmar people to develop better business practices and knowledge.
+959 401603053, +959 401603797
Powered by Orio
Copyright © 2022 Orio Economics. Powered by Nutmeg